निकै उत्तेजक तस्वीरहरुआफ्ना १८ वर्षका छोरा डेमियनलाई खिच्न लगाएको भन्दै आलोचना,अभिनेत्री विवादमा तानिए,……. – News Nepali Dainik
निकै उत्तेजक तस्वीरहरुआफ्ना १८ वर्षका छोरा डेमियनलाई खिच्न लगाएको भन्दै आलोचना,अभिनेत्री विवादमा तानिए,…….
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १५, २०७७ समय: ५:५५:११
एलिजाबेथ बिकिनी र टपलेस पोज दिन हिच्किचाउँदिनन् । २०१८ मा एक अन्तरवार्ताको क्रममा उनले आफ्ना कैयौं बिकिनी फोटोहरु छोरा डेमियनले खिचेको खुलासा गरेकी थिइन् । एलिजाबेथले छोराले फोटोग्राफी पढ्दै गरेको र राम्रो फोटो खिच्ने भएकोले आफूले फोटो खिच्न लगाएको बताएकी थिइन्
Last Updated on: January 28th, 2021 at 5:55 am
२०३६ पटक हेरिएको